Qore: Maxamuud Cumar Asad
E:Mail : muminyo@hotmail.com
Maxamuud Cumar Asad oo ah qoraaga warbixintan waxa uu ahaan jirey Agaasimaha Guud:
1) Wasaaradda Kaluumaysiga&Khayraadka Badda 1980 – 1984.
2) Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha 1984 - 1991
Waxa aannu isku dayeynaa in aannu siyaabo kooban wax uga sheegno dhowr arimood oo soomaaliya ku saabsan.
Waa maxay sifada ama tilmaanta ummadda soomaalida lagu sheego oo ay ummadaha kale kaga duwan tahay?. Waxaan u jeednaa dalkii loo yiqiin jamhuuriyada Soomaiya oo burburtay 1991.
Waa intee tiro ahaan inta lagu qiyaasay dadka Somaliya 1991, masaaxada dhulka iyo khayraadka laga heli karo?
Intee baaxad le’egyahy burburka ku dhacay bulshada Soomaaliya ha noqdo xaga dhaqaalaha, bulshada, degaanka iyo xaalufinta badda?
Maxaa sababay in ay dhacaan xaaladahaasu, yaase mas’ul ka ah in bur burka iyo halaagu si joogto ah u socdaan muddo dhan 14 sano?
Tilmaamaha ummadda soomaaliyeed
Soomaalidu waa dad wadaag ku ah wax kasta oo ummad ka dhexayn kara sida afka, dhaqanka, diinta, xeerar dhaqamedka, midabka, dhulka waa wadaagaan marka laga reebo dhul magaalo ahaan loo deggan yahay ama beeran, waxaana u sabab ah habka dhaqan dhaqaale oo ku dhisan reer guuraanimada iyo dhulka oo aad u weyn oo ay in badan biyaha iyo daaqa ku yaryahay, taasuna ay sababtay in la isugu tago meeshii leh baad iyo biyo. Waxa kale oo jira in ummadda soomaliyeed ay tahay ummad sabool ah oo aan u qaybsamin dabaqado ku kala tagsan dhaqaalaha.
Intee lagu qiyaasayey tirada dadka somaliya markii dawladu burburaysay? Masaaxada dhulka iyo khayraadka laga helikaro bad iyo beri?
Trirada dadka waxa lagu qiyaasay 7 maliyan, masaaxada dhulkana waa 630,000 Kilomiter oo isku wareeg ah, dhulbeereedka waxa lagu qiyaasay sided milyan oo hegtar.
Qiyaasta xoolaha nool waxa ay ahayd riyaha 20 milyan, Idaha 14 milyan, Lo’da 4.9 milyan , Gela 2.5-2.9milyan.
Xagga badda iyo khayraadka laga heli karo Sommaliya waxa ay leedahay xeebta Afrika ugu dheer oo dhan 3300 oo KM oo dherer ah, xagga dalxiiskana aad ugu wanaagsan. Bedka ama masaaxada ay sharci ahaan soomaalidu u leeyihiin in ay ka kaluumaystaan ama petrol iyo macaadin ka baartaan waxa ay dhan tahay 200 meyl badeed.Marka lagu dhufto 200 mayl badeed xeebta dhererkeeda, loona rogo Km(200x1.852x3300) waxaa soo baxaya 1,222,320( hal milyan laba boqol laba iyo labaatan kun,saddex boqol iyo labaatan)Km oo laba jibaaran; waa waxa loogu yeero aaga dhaqaale (Economic Zone).
Daraasado cilmiyeed oo lagu sameeyey badda Soomaaliya waxa lagu sheegay in badda Soomaaliya sannadkii lagala soo bixi karo kaluun miisaankiisu dhan yahay 200 ilaa 300 oo kun oo ton oo kala nooc nooc ah iyadoo aan wax dhibaato ah loo gaysan isu dheeli tirka nafleeyda ku nool badda.
Umadda leh dhulka iyo badda aynu kasoo sheekeynay sidee xaaladoodu ku sugantahay waqtiga la joogo?
Dalka badi waxa ka jira nabadgelyo la’aan oo waxa ku baahay colaado qabiil oo aan ku dhisnayn figrad siyaasadeed ee ku dhisan reer hebel waa cadowgeenee aynu iska dhicino. Taas waxa ka dhashay in dalkii midka ahaa uu u kala googo’o soddon aag in ka badan oo ay nimanka la baxay magacyo dhowr ah ay ku doodaan in ay kataliyaan. Nimankaas waxa bulshadu ugu yeertaa qabqable dagaal ama hoggaamiye kooxeed. Xaaladda colaadeed ee ay kooxahaasu masuulka ka yihiin waxa ay dalkii ka dhigtay xaalad aanu qaadi karim damiirka bani’aadanku.
Burburka ku dhacay soomaaliya waxaa lagu sheegi karaa halaag ku dhacay dhinac kasta.Nabadgalyo la’aanta iyo colaaddu waxay gaartay heer gumaad oo aan ujeedo lahayn .
Waxbarasho la sheegaa kama jirto dalaka; Ubadkii soo koraayey oo dalka u ahaa raasumaal in ka badan 80% waxa ay noqdeen dad aan wax akhrin waxna qorin, taas oo saadaal u ah in Soomaaliya mustaqbalka aaney is wadi Karin in la wado mooyee.
Dalka badidiisa kama jiro adeeg caafimaad, waxa aad u faafay cudurada la isku gudbiyo sida Qaaxada, Tiifowga, Burseelaha, Daacuun Caloolaha, Kaneecada, Aydhiska. Waxaa kale oo jira Dhiig yari,Umul raac iyo nadaafad xumo gaartey heer xun, taasoo sahal ka dhigtay faafida cudurada.
Dawoowinka dadka laga iibiyo in badan oo ka mid ah waa dawooyin dhcacay ama oo dhamaaday waqtigii la isticmaali lahaa. Waxa kale oo soomaaliya aad ugu batay cudurada ku dhaca maskaxda oo keena waalida, kuwaas oo loo tirnayo in ay ka dhasheen xaaladda murugsan ee ka jirta Soomaaliya. Dadka cudurkaasi saameeyey waxa ugu badan da’da dhalinta yar oo mustaqbalkoodii uu galay mugdi.
Soomaaliya burburkii ka hor waxa lagu tirinayey dawladaha adduunka ugu saboolsan mid ka mid ah. Afar iyo tobankii sano ee burburku ka socday dalka waxa dhacay dib u dhac weyn oo ku dhacay dhaqaalaha.
Sida la ogsoonyahay tiirka ugu weyn dhaqaalaha soomaaliya waa xoolaha nool. Colaadda iyo kala go’doonka waxa ka dhashay in xoolihii ku noolaa daaqa iyo in ay u guuraan hadba meeshii roob ka da’o ay suurtogal noqonweyday,sababtoo ah colaadda ka dhex jirta beelaha dhexdooda.
Waxaa kale oo joogsadey suuqii ugu weynaa ee xoolaha loo dhoofin jirey(Sacuudiga).
Beeraleyda waxa ka hor timid dhibaato ku saabsan sidii ay u suuq geyn lahaayeen miraha ay soo saaraan ,sababtoo ah jid gooyooyinka iyo burcadda oo aad u badan. Taasi waxa ay keentay inay talfaan miraha aan dhigmi Karin sida khudaarta iyo furutada(Mooska,Babayga IWM).
Ganacsiga waxaa ka horyimid dhibaatooyin ay adagtahay in laga gudbo. Dalka kama jiraan wax sahla hawlaha ganacsiga sida bangiyada. Dalka gudihiisa si xor ah looma ganacsan karo, waxa ka jira colaad dalkii ka dhigtay aagag kala xiran. Waxa kale oo jira jid gooyooyin iyo burcad aad u tiro badan. Sidaas darteed xaaladaha jira ma aha kuwo ganacsigu ku korikaro. Waxa kale oo dhaawacay dhaqaalaha lacagaha been abuurka ah.
Deegaanka waxa ka dhacay dhibaato aad u culus oo aan laga soo kaban karin. Dhirtii waa la jaray oo waxa laga dhigay dhuxul loo dhoofiyo waddamada dibada. Falkaasi waxa uu degaankii ka dhigay dhul aan lahayn dhir oo lama degaan ah.
Khayraadkii badda ku jirey waxa loo boobayaa si xad dhaaf ah oo aan horey loo arag. Waxaa boobkaasi ku shirkoobay maraakiib ajnabi ah iyo Mafia soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin kuwa sababay iney Soomaaliya sidan noqoto .
Waxa kale oo la sheegay in badda soomaaliya lagu duugo qashinka ka soo hara warshadaha. Dhalintii dalka u ahayd raasumaalka ama hantida waxa ay ku goosteen ama ku gumaadmeen labada badood oo loo yaqaan Bad yarada gacanka cadmeed iyo badda cad ee u dhaxeysa waqooyiga Afrika iyo Yurub. Dhalintaas dalkooda ayey ka rajo beeleen oo waxa ay ahaayeen dhib ka carar hase yeeshee waxa haleelay masuubo midda ugu xun.
Waxa aynu si kooban uga soo hadalnay sifada ama tilmaamaha ummadda soomaaliya gaarka u ah, dhulkeeda iyo khayraadka laga heli karo. Waxaa aynu si kooban uga soo hadalnay dhibaatooyinka ka jira dalka soomaaliya. Waxa soo baxay su’aalo waaweyn oo ku saabsan masiibada dalka ku habsatey ma mid soomaalida kaligeed ku kooban baa oo ayadu leedahay sababta iyo falka mise waa lala wadaagaa?
Marka dhibta jirtaa la qiyaaso ma tahay mid Soomaalidu kaligeed ka bixi karto mise waxa ay u baahantahay kaalmo iyo gacanqabasho aad u balaaran oo dawli ah?
Soomaaliya waxa ay dhacdaa ama ku taal meel istiraatiiji ah oo adduunyada muhim ku ah. Taasi waxa ay keentay in quwadaha waaweyni daneeyaan oo ku herdamaan. Soomaaliya waxaa ku kulma saddex badood oo nolosha adduunka meel weyn kaga jira, waxa ay kala yihiin Bad yarta Gacanka Cadmeed, Bad weynta Hindiya iyo badda carbeed. Waxa badahaas isaga goosha maraakiibta ka timaada ama u socota waqooyiga Ameerika, Yurub, Bariga dhexe, Aasiya, Australiya iwm.
Qarnigii 19aad markii ay dawladaha isticmaarku ay kala boobayeen adduunyada,lana furay Suweys kanaal,Soomaaliya waxa ay noqotay meel xagga istaraatejiyada muhim ku ah.Arrintani waxa ay sababtay in dawladihii waaweynaa (Ingiriiska,Faransiiska iyo Talyaanigu) ay kala qaybsadaan dhulkii Soomaalida,ummaddii Soomaaliduna u kala qaybsanto,dhibaatana kala kulanto.
Dagaalkii qaboobaa markii uu socdey waxa dhacay sannadihii todobaataneeyadii (1970s) in dalalka kala ah Soomaaliya, Yamantii Koonfureed iyo Itoobiya ay ku dheceen nufuudda Midowgii soofiyeetiga iyo gaashaan buurtiisa.
Dawladda Mareykanka iyo yurubta galbeed xaaladaas aad ayey u dhibsadeen waxa ay isku dayeen in ay kala furfuraan is bahaysiga uu sameeyey Midowga Soofiyeeti oo iyaga ku ahaa lid sida ay u arkayeen.
Markii ay darseen xaaladaha dawladahaas (Soomaaliya, Itoobiya iyo Yamanta koonfureed) Soomaaliya waxa ay u arkeen iney tahay meesha ugu sahlan oo silsilada laga jebin karo, waana ku guuleysteen ayaga oo dowr weyn ka cayaarey dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya.
Heshiiskii dhexmaray Soomaaliya iyo Midowgii Sofiyeedka oo ogolaanayey in ciidamada Soofiyeedku ay isticmaali karaan dekadaha iyo garoomada dayuuraha gaar ahaan Berbera, Muqdisho iyo kismaayo, dowladda Soomaaliya heshiiskaas waa ka baxdday oo waxa ay heshiis la mid ah la gashay dowladda Maraykanka.
Markii uu dhamaadey dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya, dalka Itoobiya gudihiisa waxaa laga asaasey ama ka dhismay jabhado soomaaliyeed oo nidaamkii dalka ka dhisnaa ka soo horjeedey oo dagaal hubaysanna la galay; waxaase nasiib darro noqotay in jabhadahaas figradda ay ku dhisaayeen ahayd mid reer ama qabiil oo aaney ahayn mid soomaaliyeed. Ma jirin wax xirir ah ama iskaashi ah oo ka dhexeeyey jabhadahaasi oo la dagaalamayey hal cadow , isla markaasna saldhigooda iyo taakulayntooda ay ahayd hal meel.
Jabhad kasta waxa ay la baxday magac Somaliyeed sida SSDF, SNM, SPM,USC IWM,hase yeshee mid kasta dadka ay dagaal gelisey waxa ay ahaayeen qabiil oo waxa ay dagaal ka gashay aagga ama degaanka reerkeedu u badnaa, taasuna waxa ay degaanka dadkii ku noolaa ka dhex abuurtay is nacayb iyo kala aamin bax. Waxaa kale oo jirtey in nidaamkii ka dhisnaa dalka uu qudhiisu uu hurinta colaadda kaalin muuqata ku lahaa.
Waxaa in la is xusuusiyo mudan dadkii iyo axsaabtii ka ahaa hormuudka doonistii gobanimadoonka Somaaliyeed waxa mabaadii’dooda ka mid ahaa in la mideeyo shacbiga Somaliyeed ee ku hoos jirey xukunka Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Itoobiya. Siyaasadaas doonista midnimo Somaliyeed waxa ay Somaliya u keentay in ay colaadiyaan Kenya iyo Itoobiya oo dad oo soomaaliyeed ay ku hoos noolyihiin.Arrintaas waxaa ka marag kacay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Mr Moi markii uu isaga oo booqanaya dalka Maraykanka uu si cad oo qayaxan u sheegay in dawladaha Itobiya iyo Kenya aysan doonayn in uu dhismo qaran Somaliyeed.
Siyaasadaha ku saabsan diidmada in uu dhismo qaran Somaliyeed oo xooggan ma ah mid qarsoon. Laga soo bilaabo xiligii Xayle Salasi ilaa hadda siyaasadoodu waxa ay ku taagnayd in aanu dhismin qaran xoog leh oo iyaga ka madax banana.
Kooxaha Soomaliyeed ee dalka ka wada dagaalka una kala jarjaray in ka badan soddon aag, kuwooda ugu waaweyn oo dhibaatada dalka ka jirta badi ka mas’uul ah, waxa ay taageero dhawr nooc ah ka helaan dowladda Itobiya, waxaana ka mid ah labada maamul ee la baxay Somaliland& Puntland iyo isbahaysiga la magac baxay SRRC. Labada maamul iyo kooxaha kale dhexdooda waxa ka jira colaad iyo karaahiyo ka dhalatay siyaasadda cad ee lagu burburinaayo ummadda Somaliyeed meel kasta ha joogtee. Siyaasadaasu waxa ay ka shidaal qaadanaysaa tii uu ku dhaqmi jiray Mingiste Xayle Maryam oo ahayd in la hubeeyo jabhadaha Somaliyeed oo qoys qoys ah oo hal cadow la dagaalamaya, wax isku mid ahna doonaya, iyaguna isku ah cadow. Jabhadahaas qoys qoyska ah midkasta waxa ay gaarkeeda u doonaysaa in hasha maandeeq keligeed hanato haddii kale hasha la waayo.
Waxaa in la is xusiisiyo mudan, dawladda ku meel gaarka iyo labada maamul ee ka jira waqooyi bari iyo waqooyi galbeed marka la isku daro golayaashooda wasaaradaha iyo Xeer dejinta waxa ay ku dhow yihiin laba boqol oo wasiir iyo in ku dhow shan boqol oo xildhibaan. Taasi waa arrin murugo leh oo aad looga naxo. Waxaa la fili karaa haddii kuwa kale sameystaan maamullo noocaas ah in qaranimadii ummadda Soomaliyeed aanay dib u dhismin. Siyaasadaas waxaa ka dambeeya dawlado ajnabi ah oo ay ka mid yihiin dawladaha deriska ah qaarkood oo ku fushanaaya siyaasadooda dad ka mid ah kuwa la magac baxay qabqablayaal dagaal iyo kuwa ka farcamay oo loo baxshay mooryaan, jiri IWM.
Qof kasta oo leh dareen wadaninimo dib ha u eego waxa dalka ka socda oo ay ka mid yihiin dagaalada foosha xun, faqriga, jahliga, cudurada wax gumaada, xaalufinta dhulka, boobka khayraadka badda, qashin ku duugga, dadka ku tabaalaysan xeryaha qaxootiga iyo dhalinyarada ku dhimanaysa badda cas, badda cad iyo lama degaanka Afrika.
Dalkii waxa uu noqday meel aan wax sharci ahi ka jirin. Waxaa joogsaday dhammaan sharciyadii ummadu ku dhaqmi jirtay ama ku kala bixi jirtay . ku dhaqankii shariicada islaamka, sharciyadii dawladdu u dejisay nidaaminta bulshada iyo xeer dhaqameedkii soo jireenka ahaa.,badi sharciyadaasi waa istaageen, waxaana bedeley waxa loo yaqaan sharciga duurka ama qoriga.
Waxaa kale oo khatarteeda leh in dawlado ajnabi ah oo cadow ku ah ummadda Somaliyeed ay meelaha qaarkood ka sheegaan in soomaalidu ay tahay ummad aad xagga maskaxda uga dambaysa oo aan soo gaarin heer ay ku gartaan baahida loo qabo in la noqdo dawlad. Waxa ay xujo ka dhigtaan faragelinti milalteri ee lagu sameeyey Soomaaliya, shirarkii faraha badnaa(14) ee loo qabtay soomaalida ee lagu doonayey in mushkuladooda lagu xaliyo. Shirarkaas oo uu ku jiro kan hadda ka socda dalka Kenya oo socdey muddo ku dhow labo sano midna kama soo bixin wax natiijo ah. Sidaas darteed figradoodu ma gaarsiisna heer in ay ku gartaan faa’iidada dawladi leedahay iyo inay ka saaraan dhibaatada haysata shacbigooda,Sawirkaas ama dareenkaas waxa bixiyey dadkii ka qaybgalay shirarkaas.
Annagoo ahayn dawlad muddo soddon sano ah adduunyaduna ka marag tahay waxa aynu ahayn, waa nasiib darro in ay hadda dhalato “ma noqon karaan dowlad, waayo waxaa laga garan karaa falkooda iyo fikradooda”.
Annagu waxa aanu aaminsanahay in shacbiga Soomaaliya uu dhisan karo dawlad soo celisa sharaftiisii iyo karaamadiisii oo dunida qaarkeed ku dayato, laakiin dawladaasu ma dhalan karto inta ay arrimaha Soomaaliya hor boodayaan ragga la baxay magacyada dhawrka ah oo fulinaaya siyaasadaha lagu burburinayo, laguna kala qaybinayo ummadda soomaaliyeed.
Ummadaha adduunka sida dawladda Mareekanka , Midowga Yurub, Qaramada midoobay iyo Midowga Afrika waxa aanu ka codsanaynaa in ay gargaar dhab ah u fidiyaan ummada Somaliyeed sidii ay uga bixi lahaayeen dhibaatada haysata. Sidoo kale dawladaha IGAD qaarkood waxa aanu ka codsanaybaa in ay ka daayaan dhibta ummadda soomaliyeed, waayo dhibtu kuma koobnaan doonto Somaliya oo qura.
Ummadda Soomaaliyeed ee wax garadka ah waxaannu u soo jeedinaynaa inay ka hortagaan burburka iyo halaagga ay quwadaha shisheeye iyo kuwo soomaali ku sheeg ahi ay ku wadaan dalkooda iyo ummadooda.
Aynnu u midowno in aynnu joojino colaadda iyo is nacaybka aan ujeedada lahayn, kana shidaal qaadanaya caadifad qabiil iyo is nacayb.
Aynnu u hawl gallo sidii aynnu dib ugu dhisi lahayn qarankii burburay. Dhagax dhigga dib u dhisku ha ku salaysnaado mabaadi’ qeexan oo ay ka mid yihiin in la aamino soomaalinimada iyo midnimada;in la joojiyo colaadaha,la is aamino,lana walaaloobo oo la is kaashado.
Waa in aynnu dhaqan ka dhiganaa habka dimuqraadiga ah,dhawrista xuquuqda aadanaha. Waa in aynnu dhisano dawlad ku timaada rabitaanka shacbiga oo leh amaano,karti iyo hufnaan.Waa in sharcigu leeyahay awoodda sare.
Waxaa qoray Maxamuud Cumar Asad oo ahaan jirey Agaasimaha Guud:
Faafin: SomaliTalk.com | June 22, 2003